“Arsene Wenger waa tababaraha ku haboon in uu Maurizio Sarri ka beddelo xilka Chelsea” – Gool FM
“Arsene Wenger waa tababaraha ku haboon in uu Maurizio Sarri ka beddelo xilka Chelsea”
(London) 20 Feb 2019. Goolhayihii hore ee kooxda Arsenal ee waddanka Ingiriiska David Seaman ayaa sheegay in Arsene Wenger uu yahay macallinka ku haboon in uu xilka tababarenimo kala wareego Maurizio Sarri oo mustaqbalkiisa kooxda Chelsea uu mad madoow soo galay.
Tababarihii hore ee Arsenal, Arsene Wenger oo 69 jir ah ayaa shaqo la’aan ahaa tan iyo dhammaadkii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay markaas oo uu ka tegay naadiga Arsenal ee ka dhisan Waqooyiga London.
Sarri ayaa lumiyay kalsoonida taageerayaasha Chelsea, kaddib dhowr guuldarro oo qabsaday tan iyo markii uu kooxdani macallinka u noqday oo ay ugu dambesay guuldarradii FA-ga ee 2-0 ee ka soo gaartay kooxda Manchester United.
Sidoo kale Zinedine Zidane iyo Frank Lampard ayaa iyaguna ka mid ah tababareyaasha loo soo daalinayo hoggaanka kooxda Chelsea.
“Arsene Wenger mar walba wuxuu sheegaa inuusan ku soo laaban doonin horyaalka Ingiriiska, maxaa yeelay wuxuu aad u jecel yahay Arsenal, mana doonayo in isagoo koox kale wata uu ka hor yimaado Gunners” sidaa waxaa Seaman uu u sheegay ‘talkSPORT’.
“Waxay u muuqataa in boos uu ka bannaanaan doono Chelsea dhowaan, waxayna ku xiran tahay saddexdeeda kulan ee soo socda kuwaasoo dhammaantood ah kulammo adag, balse Wenger wuu ku haboonaan lahaa booskaasi, meel walba oo uu tagana wuu ku fiicnaan lahaa waayo waa tababare heer sare ah” ayuu sii raaciyay Goolhayihii hore ee Ingiriiska.
Goolhayihii hore ee Arsenal Seaman
Arsene Wenger oo haatan shaqo la’aan ah ayaa loo saadaalinayaa xilka tababarenimo ee Chelsea
Kooxda Liverpool oo heshiis la saxiixatay weeraryahan da’yar ah